Nchịkọta Google: Edekọla Subdomain Pịa dị ka ibiaghachi | Martech Zone
Fraịdee, June 13, 2014 Fraịdee, June 13, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ ndị ahịa anyị bụ Software dị ka ndị na-enye ọrụ ma nwee weebụsaịtị na saịtị ngwa. Anyị na-adụ ọdụ ka a na - edobe ha abụọ iche iche ebe ọ bụ na ịchọrọ ịdị mfe na ngbanwe nke sistemụ njikwa ọdịnaya maka saịtị gị, mana achọghị ka njide gị site na njikwa mbipute, nchekwa na nsogbu ndị ọzọ na ngwa gị. Agbanyeghị, nke ahụ na - eweta ihe ịma aka ma a bịa na nchịkọta Google mgbe ị na - agba ọsọ abụọ dị iche iche - otu na broshuọ ahụ (www.yourdomain.com) na onye ozo na subdomain (ngwa.yourdomain.com). I nwedịrị ike ịnwe helpdesk na subdomain ọzọ (nkwado.yourdomain.com).
Ndị ọrụ gị ga-agakarị na peeji nke ụlọ gị wee pịa ntinye nbanye ma ọ bụ njikọ njikọ… nke a bụ gụrụ dị ka ibiaghachi na skews gị nchịkọta. Maka ụlọ ọrụ nwere nnukwu njirimara ọrụ, nke a nwere ike ibugharị ego karịa karịa nleta n'ezie na saịtị ha. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ achọghị ịgwakọta ihe nchịkọta n'etiti broshuọ ha na saịtị na ngwanrọ ha dị ka ikpo okwu ọrụ.
Azịza ya nwere ike ịdị mfe - naanị soro otu ihe omume na njikọ menu nke na-ebugharị okporo ụzọ na subdomains ndị ahụ. Onu ogugu bu mgbe onye obia ruru na saiti gi ma ghara inwe mmekota ya. Ihe omume bu mkparita uka. Yabụ ọ bụrụ na onye ọbịa bịara na saịtị gị, wee pịa njikọ nke na-ebute ihe omume, ha agbaghị.
Ndepụta omume dị mfe iji mejuputa. N'ime ederede arịlịka, ị na-agbakwunye ihe omume ịchọrọ ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ị nọ na WordPress, enwere nnukwu ngwa mgbakwunye maka nke a - GA Na-achọpụta menu, nke na-enye gị ohere ịtọlite ​​nsuso nsuso na menu gị ma ọ bụ ị nwere ike pịa igbe iji mee ka ọ bụrụ mkparịta ụka na-enweghị isi.
Tags: ibiaghachiihe omumeGoogle Analyticssubdomaintrackeventwordpress plugin
Jun 14, 2014 na 8:58 AM
Ọzọ dị ukwuu post Doug !! Daalụ maka ịkekọrịta ..
Jun 15, 2014 na 9:56 AM